La qabsiga Dhaqanka (Barida Kala duwanaashaha Dhaqanka ee Qaxootiga) - CORENav
La qabsiga waa arrin qaadata mudo aad udheer. Hawshu way ukala duwan tahay dadka kala duwan, laakiin waxaa jira marxalado gaar ah oo dadku raacaan intay laqabsanayaan dhaqanka.
Sida dadka kale ee wadankooda katagay oo dagay wadan shisheeye, waxaad maangal ahaan dareemaysaa walwal iyo niyad xumo intaad isku dayayso laqabsashada wadankaaga cusub Dareenadaan waa caadi, wayna iska baaba’aan mudo kadib. waxaad ubaahan kartaa 2 ilaa 5 sano inaad si buuxda ula qabsato noloshada cusub. Laqabsigaaga wuu fududaanayaa hadaad lashaqayso dad ku caawinaaya. Inaad dulqaad yeelato, maskaxdaada furto, aadna barato qaababka caafimaadka qaba ee looga hortag owalbahaarka iyo wareerka dhaqanka waxay kaa caawin kartaa inay kuu fududaato fahanka dhaqanku. Raadinta shaqo iyo barashada Ingiriisiga ayaa sidoo kale kaa caawinayaa laqabsiga. Barashada laqabsiga dhaqan cusub maaha wax fudud, laakiin waxay sidoo kale noqon kartaa khibrad wanaagsan adoo baranaaya waxyaabo cusub helaayana xirfado cusub.
La qabsiga ee Xagasha ah
Waxaa jira afar qaybood oo ugu badan oo loola qabsado dhaqanka kuwaasoo aad lakulmi doonto intaad laqabsanaysid dhaqanka: todoba bax, wareer dhanka dhaqanka ah, laqabsi, waynayn.
Qaybta Todoba baxa
Waxaad dareemaysaa farxad iyo raynrayn, waxkasta waa cusub yihiin waana wacan yihiin. Tani waxay badanaa dhacdaa isla marka aad timaado meel cusub.
Qaybta wareerka dhaqanka
Waxaad dareemaysaa walwal iyo wareer inta aad, qofkaaga cusub, aad isku dayayso inaad laqabsato meel kugu cusub oo aadan aqoon.
Dareenkaaga caadi ayuu noqdaa markaad kasoo baxdo wareerka dhanka dhaqanka ah waxaadna bilaabaysaa inaad dareento raaxo iyo kalsooni aad kuqabto deegaankaaga cusub.
Waxaad dareemaysaa raaxo aad kuqabto noloshaada iyo dhaqankaaga cusub, inkastoo ay jiraan xaalado adag mararka qaar.
Qaababka loola tacaalo wareerka dhanka dhaqanka ah waxaa kamid ah lajoogida asxaabta, dheelida ciyaaraha, iyo la socshada ilaha diinmaha ama ruuxiga ah. Haddii adiga ama qof kamid ah qoyskaaga uu ka adkaan waayo walbahaarka uu kaqaaday noloshaada cusub ee Maraykanka, isla markaba caawimaad raadso.
Kaqayb galida bulshooyinka maxaliga ah adoo kaqaybgalaaya munaasabadaha dhaqanka ama mutadawica waxay sidoo kale kaa caawin karaan inay kuu fududaato laqabsigaaga ku noolaanshaha Maraykanka. Ka qayb qaadashada bulshada waa qaab aad kula kulmi karto maaha kaliya xubnaha kale ee isku isir am isku diinta tihiin, laakiin ad sidoo kale kula kulmi karto dadka Ameerikaanka ah aadna kubaran karto Ingiriisiga. Shaqaalaha dib udajinta ayaa kaa caawinaaya inaad wax kabarato bulshadaada cusub. Iskaa u samahi bulshadaada sidoo kale.
Wada xidhiidhka iyo isdhaglka qoyska Qoyska
Dib udajintu waxay badali kartaa waxa xidhiidhka iyo isdhexgalka qoyska ayadoo iyagoo beddelaya doorarka jira.. Isbadalka kudhaca doorarka ay qoysku ciyaaraan waa qaybaha ugu walbahaarka badan dib udajintu ukeento qaxootiyada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sifooyin cafimaad qaba oo wax looga qaban karo isbadalada doorka. Si furfuran oo daacad ah ufahan xubnaha qoyska si qof walba fikir fiican uga qaato waxa qof walba oo qoyska kamid ah uu dareemaayo ama uu kufikiraayo.
Waalidiinta qaxootiga ah waxay lakulmi karaan caqabado inta caruurtoodu laqabsanayso dhaqanka si dhakhso badan kana duan sida waalidku ula qabsadaan. Waalidku majeclaysan doonaan waxyaabaha qaar ee caruurtoodu rabaan inay sameeyaan iyo qaababka ay uhadlaan ama udhaqmaan. Wali dhaqanada qaar waalidiinta waxay noqon karaan kuwo aan la aqbali karin oo sharci daro ku ah Maraykanka. Hadaad walaac kaqabto qoyskaaga ama aad la dhiboonayso caruurtaada, lahadal qof jooga wakaaladaada dib udajinta. Way ku caawin karaan ama waxay kugu xiri karaan adeegyada qoyska ama barnaamijyada bulshadaada.
Qiyamyada Ameerikaanka iyo Curfiyada Dhaqanka
Maraykanku waa mujtamac kaladuwan, kana koobaan umad kala duwan asal ahaan, isir ahaan, diin ahaan, dhaqamo ama cadiidooyin kala duwan leh, wali waxaa jira curfiyada dhaqan iyo filashooyinka aadka u faafsan dhamaan wadanka Maraykankoo dhan. Inaad dulqaad iyo xushmad umuujiso dadka oo dhan, waxay rabaan hanoqodaan caqiidadooda iyo qaab nololeedkoodiye, waa qiyamka aad muhiim ugu ah inta badan dad Ameerikaanka ah. Waa inaad udulqaadataa aadna xushmaysaa dadka adiga aan kula midka ahayn, waana inaad filataa isla dulqadka iyo xushmada dhankoodana.
Qaar kamid dhaqanadaada waxay ka duwanaan karaan kuwa inta badan dadka Ameerikaanka ah. Dhaqanada qaar waxaa loo arki karaa inay yihiin kuwo aan macquul ahayn oo xataa mararka qaar sharci daro ah. Iskastoo dadka Ameerikaanka ah ay ufurfuran yihiin dhaqananada kale iyo sida dadka kale wax usamaystaan, waxaa jira qiyamyo gaar ah oo aasaasi ah, waxyaabo ay aaminsan yihiin, iyo dhaqano ay rabaan in dadka Maraykanka dagan inay raacaan:
Falsafadaha iskufilnaanta iyo isdhiiri galinta shaqsiga ah waa lafdhabarka dhaqanka Ameerkaanka iyo la qabsigaaga dhaqanka.
Dadka Ameerikaanka ah waxay aamin sanyihiin in raga iyo dumarku siman yihiin, waxayna tixgaliyaan madax banaanida raga iyo dumarka labadaba.
Dadka waxaa laga filayaa inay waqtiga saxda ah yimaadaan balamaha iyo kulanada, hadday tahay mid xirfadeed ama arimo shaqsi intaba. In aad soo daahdo waxaa loo arkaa xushmad daro, mararka qaarna soo daahidu waxay sababi kartaa cawaaqib xun. Waxaad waayi kartaa shaqadaada haddaad kasoo daahdo, waxaadna lumin kartaa balamaha hadaadan waqti sax ah imaan si aad ula kualanto shaqaalaha kiiskaaga, dhakhtarka, ama dadka kale ee adeegyada bixiya.